Wiil 19 jir ah oo u dhashay magaalada Sioux City ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta toogasho ay | KWIT
Wiil 19 jir ah oo u dhashay magaalada Sioux City ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta toogasho ay
By Halima Osman • Jan 5, 2021
Somali News 01.05.21
Wiil 19 jir ah oo u dhashay magaalada Sioux City ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta toogasho ay ku dhinteen haweeney halka seddex kalena ay ku dhaawacmeen xaflad sannadka cusub. Booliska Magaalada Sioux ayaa sheegay in Christopher Morales lagu soo oogay dacwad cabsi gelin ah oo uu u adeegsaday hub khatar ah isla markaana uu ku socday hub ujeedo
Booliska ayaa sheegay in Morales uu qof ku qasbay inuu galo guriga ku yaal xaafada Morningside, halkaas oo xaflada lagu qabanayay. Isaga iyo kuwa kale ayaa kadib dhowr xabadood ku dhuftay guriga.
Sideed iyo toban jir Mia Kritis (Kree-tis) ayaa ladilay seddex kale oo dhalinyaro ahna waa la dhaawacay.
Booliska ayaa sheegay in Morales uu wajihi karo dacwado dheeri ah. Kritis wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee North.
Maaddaama Siouxland ay u taagantahay cimilo jiilaal badan, Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in sannadka 2020 uu ahaa sanad qalalan Sioux City.
Sannadku wuxuu ku dhammaaday in ka badan 20 inji oo roob ah. Caadi ahaan, waxaan arki lahayn qiyaastii 28 inji. Marka, sanadka wuxuu ka badnaa in ka badan toddobo iyo badh inji (7.66) oo ka hooseeya sida caadiga ah taas oo 2020 ka dhigeysa 19-kii sanadkii ugu qalalanaa diiwaanka.
Saadaasha hadda waxay ku baaqeysaa hal-ilaa-seddex inji oo guud ahaan qeyb weyn oo ka mid ah Siouxland oo leh baraf isku dhafan, qulqulaya qabow iyo roob bilaabanaya caawa ilaa berri. Adeegga Cimilada Qaranka ayaa soo saaray La-talin Cimilada Jiilaalka caawa ilaa berri.
Qorshe dib loogu soo nooleynayo webiga webiga ee Sioux City ayaa helay dhiirigelin weyn maanta. Waaxda Arimaha Dhaqanka ee Iowa waxay gudoonsiisay Mashruuca Dib u Hormarinta Chris Larson Park $ 400,000. Waxay ahayd lacagtii ugu badneyd ee $ 1.25 milyan loo dhiibo sagaal beelood oo ku baahsan gobolka oo qayb ka ah barnaamijka Goobaha Weyn ee Iowa.
Wajiga mid ka mid ah in ka badan $ 12 milyan oo doolar ayaa la jabiyey bishii Juun. Waxaa ku jira beero cusub oo dadweyne oo ku yaal meeshii ay Argosy Casino u fadhiisato. Beerta waxaa ku jiri doona aragti, saddex hoyga, garoomada kubbadda koleyga waxayna qaadan doontaa qiyaastii laba sano in la dhammaystiro.